ကြယ်လိပ် - ဝီကီပီးဒီးယား
(အင်္ဂလိပ်: Burmese Star Tortoise)
ဂျပန်နိုင်ငံ၏ အဏ္ဏဝါပြတိုက်တစ်ခုမှ မြန်မာ့ကြယ်လိပ်များ
မျိုးသုဉ်းလုနီးပါးအန္တရာယ်ရှိ (IUCN 2.3)
မြန်မာ့ကြယ်လိပ် (Burmese Star Tortoise) သည် ရှားပါးမျိုးစိတ်များတွင် ပါဝင်ပြီး သိပ္ပံအမည် (Geochelone Platynota) သည် မြန်မာနိုင်ငံ၌သာ တွေ့ရှိရသော ဒေသရင်းမျိုးစိတ် (Endemic Species) ပင် ဖြစ်သည်။ ကြယ်လိပ်များကို မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး နှင့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး တို့၏ အပူပိုင်း ခြောက်သွေ့သော ဒေသများတွင် နေထိုင်ကျက်စားလေ့ရှိသည်။ ဒေသအလိုက် ကြယ်လိပ်၊ ဆီချိုလိပ်၊ ပင့်ကူလိပ်၊ ပန်းလိပ်၊ ရွှေလိပ်၊ နတ်လိပ်ဟု ခေါ်ဆိုကြသည်။
ကြယ်လိပ်တို့သည် မှို၊ အသီးအရွက်၊ အပွင့်တို့ကိုသာမက တီကောင်၊ ခရုတို့ကိုပါ စားသောက်လေ့ ရှိသည်။ အစုံစား သတ္တဝါမျိုးပင် ဖြစ်သည်။ ကြယ်လိပ်၏ သဘာဝတွင် တစ်နှစ်အတွင်း တစ်ကြိမ်မှ လေးကြိမ်အထိ ဥ ဥလေ့ရှိသည်။
၁ ပုံသဏ္ဌာန် ဖော်ပြချက်
၂ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး လုပ်ဆောင်မှုများ
၂.၁ မွေးမြူရေး အစီအစဉ်များ
ကျောပြင်ပေါ်မှ အလင်းရောင် ဖြာထွက်နေသည့် ကြယ်ပုံသဏ္ဌာန်အစင်းများ
မြန်မာ့ကြယ်လိပ်သည် အခွံပေါ်တွင် ကြယ်မှ အလင်းရောင်ဖြာထွက်သကဲ့သို့ ပုံသဏ္ဌာန်ရှိသော အရောင်ဖြင့် အဆင်းကြောင်းများ ရှိသည်။ ထို့အပြင် အခွံ၏ ယင်း ကြယ်အလင်းဖြာထွက်ပုံ ဖြစ်နေသည့် အဆင်းကြောင်းနေရာများသည် အပြင်သို့ အကြောင်းလိုက် ခုံးထွက်နေသောကြောင့် မြင်ရသည်မှာ ကျောအခွံပေါ်တွင် ကြယ်ပုံသဏ္ဌာန် ထွင်းထားသကဲ့သို့ ထင်ရ၏။
မြန်မာ့ကြယ်လိပ်များကို IUCN မှ မျိုးသုဉ်းရန်အန္တရာယ်ရှိသော မျိုးစိတ်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။ သို့ပါသော်လည်း အိမ်နီးချင်း တရုတ်နိုင်ငံမှ စားသောက်ဆိုင် ဈေးကွက်၏ လိုအပ်ချက်မြင့်မားမှုကြောင့် တရားမဝင်ရောင်းဝယ် ဖောက်ကားနေကြဆဲပင်ဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီက မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ကွင်းဆင်း လေ့လာမှုတစ်ခုအရ ၎င်းတို့၏ မူရင်းဒေသများတွင် စေတနာ့ဝန်ထမ်း ငါးဦးဖြင့် အထူးလေ့ကျင့်ထားသည့် ခွေးများ အသုံးပြု၍ နာရီပေါင်း ၄၀၀ မျှပင် ရှာဖွေခဲ့ရာ ငါးကောင်သာ ရှာတွေ့ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ၎င်းသည် CITES ကွန်ဗင်းရှင်း၏ နောက်ဆက်တွဲ ဖော်ပြချက်အမှတ်(၁) ၌ ပါရှိပြီး၊ ၎င်းကြယ်လိပ်များအား အကောင်လိုက် အရှင်ဖြစ်စေ၊ သေဆုံးပြီးဖြစ်စေ၊ ၎င်း၏ခနွာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းများနှင့် နမူနာပြုအစိတ်အပိုင်းများ (Specimens) ဖြစ်စေ ရောင်းဝယ် ဖောက်ကားခြင်း၊ လက်ဝယ်ထားရှိခြင်းတို့အား ဥပဒေဖြင့် တားမြစ်ထားသည်။
လိပ်မွေးမြူခြင်းများကို ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ကောင်ရေ ၂၀၀ ဖြင့် စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် လိပ်ကောင်ရေ ၁၄,၀၀၀ ထိ တိုးတက်လာခဲ့ကာ လိပ်အကောင် ၁၀၀၀ ကိုလည်း မူရင်းဒေသတောရိုင်းများသို့ ပြန်လည်ထားရှိပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကြယ်လိပ်များမှာ တောမီးလောင်ခြင်း၊ နေထိုင်ရာတောများ ဆုံးရှုံးခြင်း၊ နိုင်ငံတကာ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းများကြောင့် အရေအတွက် နည်းလာခဲ့သည်။ သို့အတွက် ကြယ်လိပ်များကို စနစ်တကျ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ကြယ်လိပ်များကို ထိန်းသိမ်းသည့် နေရာ သုံးခု ရှိသည်။
လောကနန္ဒာ ဘေးမဲ့တောဥယျာဉ် ပုဂံ
ရွှေစက်တော် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် ဘေးမဲ့တော၊ မင်းဘူးမြို့နယ်
နွားထိုးကြီးမြို့နယ်၊ မင်းစုံတောင် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် ဘေးမဲ့တော
များတွင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက် မွေးမြူလျက်ရှိသည်။ ထို့အပြင် လက်ရှိတွင် မန္တလေးမြို့၊ ရတနာပုံတိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်မှလည်း မြန်မာ့ကြယ်လိပ်များ မျိုးသုဉ်းမသွားစေရန် အကောင်ရေ တိုးလာစေရေး စောင့်ရှောက်မွေးမြူလျက်ရှိသည်ဟု သိရသည်။
Geochelone platynota -Toronto Zoo, Ontario, Canada
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်၊ မင်းစုံတောင်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် ဘေးမဲ့တောတွင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားရာ အကောင်ရေ ၃၀၀၀-ကျော် ရှိလာပြီ ဖြစ်သည်။ ကြယ်လိပ်များကို စနစ်တကျ မွေးမြူစောင့်ရှောက်ထားပြီး ဥချိန်မှအစ စာရင်းကောက်ယူကာ ပေါက်ဖွားသည့် ခုနှစ်အလိုက် မှတ်တမ်းများ ပြုစုထားသည်။
↑ Fritz Uwe (2007). "Checklist of Chelonians of the World". Vertebrate Zoology 57 (2): 279. ISSN 1864-5755. Archived 17 December 2010 at WebCite
↑ Archived copy။4March 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 29 October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Burmese star tortoise
↑ မန္တလေးနေ့စဉ်၊ ၁.၁.၂၀၁၉၊ စာ-၁၀
ကိုလံဘီယာ သိပ္ပံ၏ သုံးသပ်ချက်
မြန်မာ့ကြယ်လိပ်များအတွက် ပြန်လည်စတင်မည့် နေရာများအား အကဲဖြတ်ခြင်း။
မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း၌ အရေးပေါ် အန္တရာယ်ကြုံတွေ့နေသော မြန်မာ့ကြယ်လိပ် Geochelone platynota ၏ ဦးရေ အခြေအနေနှင့် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး
မျိုးသုဉ်းလုနီးပါးအန္တရာယ်ရှိနေသည့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်နှင့် သစ်ပင်ပန်းမန် မျိုးစိတ်များ ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ သဘောတူစာချုပ်
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကြယ်လိပ်&oldid=726211" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၂၁:၃၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။